Articles tagged 'ray kaukonde'
'Kaukonde forgery a hoax' 2 December 2014 HARARE - Ray Michael Tapuwa Chimbganda, the man who was allegedly robbed of his Ordinary Level (O’ Level) certificates by Ray Kaukonde, says he never lost his papers to the Harare businessman. This comes as the Mutoko man has inadvertently been sucked into a political storm and Zanu PF faction...
Vote of no confidence against Kaukonde 18 November 2014 HARARE - Ray Kaukonde, the Zanu Mashonaland East provincial chairman, was yesterday booted out after the local executive passed a vote of no confidence in him. While Kaukonde was unreachable for comment yesterday, Phineas Chihota, the secretary general, has been appointed the acting provincial...
War vets back Kaukonde 6 November 2014 HARARE - War veterans in Mashonaland East have come out in support of Zanu PF provincial chairperson Ray Kaukonde, distancing themselves from the demonstration staged against him in Marondera. A group of people claiming to be war veterans on Tuesday demonstrated against Kaukonde and marched to...
Plans to expel Mujuru allies resisted 3 November 2014 HARARE - Plans by supporters of Justice minister Emmerson Mnangagwa to unseat Zanu PF provincial chairpersons perceived to be sympathetic to embattled Vice President Joice Mujuru have hit a brick wall. This emerged over the weekend after the party held tense provincial coordinating committee (...
Tycoon's land trial stalled 12 January 2014 HARARE - The trial of businessman Craig John William Danckwerts, which has sucked in Mashonaland East Zanu PF provincial chairperson Ray Kaukonde, failed to proceed on Thursday, with claims that the tycoon raised concerns with the Prosecutor General’s office. Danckwerts is facing fraud charges...
War veteran challenges Kaukonde 14 November 2013 HARARE - Ray Kaukonde, Zanu PF's incumbent Mashonaland East provincial chairperson, faces a challenge from war veteran leader Philemon Mutongi in polls for the provincial chairperson due next week. Kaukonde was expected to retain his post unchallenged, but Mutongi filed his papers at the last ...
I didn't expel Samukange from Zanu PF: Kaukonde 21 October 2013 HARARE - Zanu PF chairperson for Mashonaland East Ray Kaukonde has denied accusations that he is blocking attempts by independent legislator Jonathan Samukange to re-join Zanu PF structures in the province. The Mudzi South legislator went against the party after he contested in the July 31 ele...